Nagarik Shukrabar - पढ्ने बानी बसाल्ने १३ सूत्र
बिहिबार, ०७ कार्तिक २०७६, ०१ : २६
पढ्ने बानी बसाल्ने १३ सूत्र
आइतबार, २६ जेठ २०७६, ०७ : २९ | शुक्रवार
पठनमा रमाउन त्यस्तो विधि पढन्ते भइरहनु पर्दैन । तपाईं पठनमा रमाउन सक्नुभयो भने यसले कुनै विषयमा जानकार मात्र बनाउँदैन, गर्न आँटेका काममा पनि सहयोग पु¥याउँछ । पठनले हाम्रो सोचाइ र चिन्तनलाई फराकिलो बनाउँछ । साथीभाइको जमघटमा होस् या प्रोफेसनल कुराकानी गर्दा नै किन नहोस्, पठनमा रुचि हुनेहरुमा कुरा गर्ने मेसो पनि हुन्छ । तर हिजोआज अधिकांशको एउटै गुनासो हुन्छ, पढ्न त मन छ तर के गर्नु ? फुर्सदै हुन्न । साँच्चिकै हामीलाई पढ्न मन छ भने र केही कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने पढ्नको लागि समय छैन भनिराख्नु पर्दैन ।
एकैचोटी धेरै पढ्न खोज्दा पढ्न सकिँदैन । भर्खरै पढ्न सुरु गरिएको छ भने कुन कुन पुस्तक पढ्ने भनेर छनोट गर्नुस् । पूरा गर्नै नसक्ने प्रतिबद्धता नगर्नुस् । आज यति पढिसक्छु भनेर सहजताको साथ सुरु गर्ने । पुस्तक पढ्ने बानी नभएकाले आज ५० पाना पढिसक्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पढ्ने तनाव हुँदैन । भोलि पनि त्यही पुस्तक सुरुवात गर्ने र पढ्दा तनाव महसुस भएन भने अघिल्लो दिनको भन्दा १० पाना अरु बढाउन सकिन्छ ।
आफ्नो उद्देश्य आफैँले बनाउने
पढ्ने उद्देश्य आफैँले बनाउने हो । अरु कसैले भन्दैमा बानी बस्दैन । अरुले भनेको आधारमा पढाइ त सुरुवात गरिएला तर निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ । सन् २००९ मा अमेरिकी एक विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानले जसले अब यसरी पढ्छु भनेर साथीभाइमाझ योजना सुनाउँछ, कालान्तरमा उनीहरुले नपढ्ने देखिएको थियो । किन यस्तो हुन्छ त ? अनुसन्धानअनुसार आफू कसरी पढ्ने भन्ने योजना अरुलाई सुनाउँदा अर्काे व्यक्तिले तिमीले भनेजसरी हैन, मैले भनेजसरी पढ भनेर योजना सुनाइँदिदा र त्यो योजना अँगाल्दा आफ्नो योजनाले विफल भएको देखिएको छ । त्यसकारण केही नितान्त व्यक्तिगत योजना नसुनाएकै राम्रो ।
अत्यास लाग्दा नआत्तिनुस्
अधिकांश पाठकलाई जतिसुकै मज्जाको पुस्तक भए पनि बीचमा पुगेपछि पढ्न अल्छी लाग्छ । मैले यो किन यो पढिरहेको छु भनेर अत्यास लाग्छ तर पिर नमान्नुस् । जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ । पढिरहेको पुस्तकबाट केही ज्ञान प्राप्त गरेजस्तो लाग्दैन वाहियात लाग्छ भने त्यो छाडिदिनुस् र अर्काे सुरु गर्नुस् । ‘द ह्यापिनेस प्रोजेक्ट’का लेखक रविनले भनेका छन्– जित्ने मान्छे कहिल्यै भाग्दैन । ऊ अघि बढ्छ । पढ्दापढ्दै अल्छी लाग्यो भने तपाईं झन् धेरै पुस्तक पढ्नुस् राम्रा राम्रा । अल्छी लाग्यो भनेर बीचैमा छाड्ने हो भने कहिल्यै पढिदैन ।
जे मन पर्छ त्यही पढ्ने
सुरुवाती चरणमा आफ्नो रुचि के हो थाहा नहुन सक्छ । त्यतिबेला जुनसुकै पुस्तक पनि पढिन्छ तर केही फरक स्वादका पुस्तक पढ्दै गएपछि भने आफ्नो रुचि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ । मान्छेको स्वभावअनुसार रुचि फरक हुने गर्छ । कसैलाई आख्यान मन पर्ने हुन सक्छ भने कसैलाई गैरआख्यान । आफू जे पढ्दा रमाउन सकिन्छ, त्यही विधा रोज्न सकिन्छ ।
जहाँ जाँदा पनि आफूसँगै पुस्तक लैजानुस्, नछुटाउनुस् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले थोरै फुर्सद हुँदा वा मौका पाउनेबित्तिकै पढ्न सक्नुहुन्छ । कसैलाई पर्खिरहनुभएको छ, अस्पतालमा लाइनमा हुनुहुन्छ भने यस्तो बेलामा तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथी पुस्तक नै बन्न सक्छ ।
पढ्नको लागि समय छुट्ट्याउनुस्
सबैभन्दा ठूलो कुरा पढ्नका लागि समय छुट्ट्याउनु हो । जब हामीले समय नै छुट्ट्याएर, यो महŒवको काम हो र यसलाई म यति समयमा पढ्छु भनेर प्रतिबद्ध भयौँ भने केही दिनभित्रमा नै हामी त्यो समय तालिकामा अभ्यस्त हुन्छौँ । हामी अधिकांश समय सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा बिताइरहेका हुन्छाँै । सामाजिक सञ्जाल र युट्युब चलाउने समय घटाइदिने हो भने पढ्नका लागि समय निकाल्न सकिन्छ ।
पढ्ने कुरालाई चुनौतीका रुपमा लिनुहोस्
निरन्तर ३÷४ घण्टा लगातार पढ्नु कम्ती त चुनौतीको कुरा हैन ! पढाइलाई हलुका रुपमा नलिई चुनौतीको रुपमा लिनु पर्छ । त्यसरी लिँदा समयको व्यवस्थापन मिल्छ । सँगै अरुले के पढिरहेका छन् भनेर चिया गफ पनि गर्न सकिन्छ ।
पढ्ने वातावरण आफैँ सिर्जना गर्ने
वरिपरिको वातावरण आफैँ सहज हुँदैन, न त अरुले नै सहज बनाइदिन्छन् । आफूलाई कस्तो वातावरण चाहिएको छ, त्यसैअनुसार वातावण सिर्जना गर्ने हो । घरमा होहल्ला हुन्छ, आफ्नै फोन आएर हैरान भइन्छ भन्ने छ भने हल्लाकै बीचमा पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ र पढ्ने बेलामा मोबाइललाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ ।
पुस्तक आफैँ किन्ने
जसरी हामी कपडाका लागि तथा अरु कामका लागि भनेर पैसाको जोहो गर्छाैं, पुस्तकको लागि पनि जोहो गर्नुपर्छ । पुस्तक मागेर हैन, आफैँ किनेर पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । जब पुस्तक पढिसकिन्छ, त्यसपछि त्यो पुस्तकबारे धारणा बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई लेखेर अथवा छलफल गरेर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने
धेरै जसोलाई प्रिन्ट पुस्तक नै मन पर्छ । पुस्तकको सुगन्ध, नयाँ पानालाई सुम्सुम्याउनुको मज्जा नै छुट्टै हुन्छ । स्क्रिनमा पढ्नुभन्दा पुस्तकै हातमा लिएर पढ्नु कयौँ गुना आनन्द हुन्छ ।
सधैँभरि साथमा प्रिन्ट पुस्तक नै लिएर हिँड्न नमिल्न सक्छ । त्यसको विकल्प स्वरुप अडियो बुकलाई लिन सकिन्छ । हातहातमा स्मार्टफोन हुनेले सुन्न र स्क्रिनमा पढ्न सहज हुन्छ ।
पढ्ने कुरालाइ विशेष केही नठान्नुस् । पढ्नु पनि प्राकृतिक कुरा हो, जसरी हामी खान्छौँ श्वास फेर्छांै, सोच्छाैँ, त्यस्तै पढ्नु पनि एउटा काम हो भन्ने सोच्नुस् । यसरी सोच्दा पढ्नै पर्ने छ भनेर चिन्ता लिइरहनु पर्दैन ।
पढ्ने कुरा धेरै छन्
अखबार, म्यागेजिन, अनलाइन सामग्रीहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । फुर्सद भयो कि पढ्न तयार भइहाल्नुस् । जस कारण तपाईंको पढ्ने गति बढ्न थाल्छ ।
धेरै थरिका पुस्तक पढ्ने
पुस्तकहरुको विविधता यति धेरै छ कि हामीले के गर्दा के पढ्ने भनेर छुट्ट्याउन सक्छौँ । घुम्दा पढ्ने, घरमा गहिरो अध्ययन गर्ने, रेस्टुराँमा पढ्ने विषयहरु कि त किताब कि त इबुक छुट्याउनु पर्छ । यसरी ठाउँअनुसार, मुडअनुसार र इबुक वा किताबलाई छुट्याउन थाल्नु भएपछि तपाईंको पढ्ने जाँगर पनि बढ्दै जान्छ ।
जति पढ्दै गयो, उति धेरै नयाँ कुरा थाहा हुँदै जान्छ । यसै समय खेर फाल्नु भन्दा पढ्नुका फाइदा बुझ्दै जानुहुन्छ ।
इन्क म्यागेजिनबाट अनूदित
यसरी हुन्छ स्वअध्ययन प्रभावकारी
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पछिल्लो समय स्वयम् अध्ययनको क्रम बढेको छ। जुन विषयमा पनि सहज रुपमा पढ्ने सामग्री उपलब्ध भएकाले कम्प्युटर, ट्याबलेट/आइप्याड र स्मार्टफोनमा आफैँ अध्ययन गर्ने क्रम बढेको छ।
उत्कृष्ट विद्यार्थीका १० गुण
पढाइमा उत्कृष्ट हुने चाहना सबैमा हुन्छ। चाहना हुँदाहुँदै पनि सबै उत्कृष्ट हुन सक्दैनन्। विद्यार्थीमा कस्ता गुण हुने हो भने कक्षामा उत्कृष्ट हुन्छन् त ? विषयवस्तुले के भन्न खोजेको हो कसरी बुझ्ने ? उत्कृष्ट विद्यार्थीका के–के त्यस्ता बानी हुन्छन्, उनीहरु सधैँ उत्कृष्ट हुन्छन् ? विद्यालय तहमा राम्रो गरिरहेका विद्यार्थी क्याम्पस तहमा राम्रो गर्न सक्दैनन्। कारण, गहिरो गरी अध्ययन नगर्नु नै हो !
त्रिवि उपकुलपति छनोट विवाद: पार्टीको कार्यकर्तादेखि बौद्धिक चोरीको आरोपीसम्म
बौद्धिक चोरीको आरोप खेपेका प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियाँलाई २०७२ साल भाद्र ७ गते सुशील कोइरालाको सरकारले उपकुलपतिमा नियुक्त ग-यो। शिक्षाध्यक्षमा सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रारमा डिल्लीराम उप्रेतीको नियुक्ति भयो। खनियाँ कांग्रेस निकट हुन् भने त्रिपाठी र उप्रेती कम्युनिस्ट निकट हुन्।